Saraakiishii afgemibiga Turkiga ee loo qorsheeyay inay dilaan madaxweyne Erdogan oo gacanta lagu soo dhigay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Saraakiishii afgemibiga Turkiga ee loo qorsheeyay inay dilaan madaxweyne Erdogan oo gacanta lagu soo dhigay
11 ka mid ah saraakiishii isku dayay inay khaarijiyaan madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la qabtay kadib baadi-goob in muddo ah socday oo lagu raad-joogay sida ay soo werisay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu.
Saraakiishaasi ayaa sida la sheegay laga soo qabtay tuulada Sirinkoy oo ku dhaw magaalada Marmaris ee koonfurta dalka Turkiga, waxaana howlgalka fuliyay ciidamada gaarka ah ee dalkaasi,
Sidoo kale, saraakiishaashi la qabtay ayaa ka tirsanaa ilaa 37 sarkaal oo loo soo carbiyay weerarka ka dhanka ah madaxweynaha Turkiga Recep Tayyib Erdogan.
Laba ka mid ah saraakiishaasi la qabtay oo magacyadooda lagu sheegay Mustafa Serdar Ozay and Muammer Gozubuyuk ayaa ahaa saraakiisha hogaamineysay ciidamada weerarka ku qaaday madaxweyne Erdogan.
15-kii bisha July ayaa ciidamo gaaraya ilaa 20 askari weerar ku qaaday goob uu nasasho u joogay madaxweyne Erdogan oo ku taala magaalo xeebeedka Marmaris, waxaana daqiiqado yar ka hor ay ku seegeen Erdogan oo halkaasi isaga tegay.
Uljeedka askartaan ayaa ahaa inay qabtaan ama dilaan madaxweynaha Turkiga Reccep Tayyib Erdogan, waxayna qeyb ka ahaayeen qorshihii kooxda ciidamada ee afgembiga dhigtay, iyadoo madaxweyne Erdogan 15 daqiiqo uga bad-baaday qorshaha lagu dili lahaa.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda Turkiga ayaa olole weyn ku qaaday ciidamada militeriga iyo dhammaan dadkii ku lug yeeshay afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi, waxaana madaxweyne Erdogan ku dhaartay inuu dalka ka nadiifin doono taageerayaasha wadaadka lagu magacaabo Fathullah Gulen, oo lagu eedeeyay inuu soo qaban qaabiyay afgambiga dhicisoobay.